Waxaan xusuustay Aristotle oo saaxiibtinnamada saddex u kala qaaday.
Tan labaad, waa xiriir istaraatiijik ah. Waxaa ay jirtaa oo mida waliba la joogga midka kale uu jecel yahay inta uu dan ku haysto ama ka rajeynayo.
Midda saddexaad wuxuu ku tilmaamay Saaxiibka dhabta ah. Waa qof aan adiga ku ahayn laakiin aad adigu aad u qaddariso una dhowrto oo aad la jeceshahay wax kasta oo aad naftaada la jeceshahay. Walaaciisu waa walaacaaga, farxaaddiisuna waa farxaddaada. Marka aad wadajirtaan waxaa idiin kororta quwad, maskax ayaad isku biirisaan, talo wadaag ayaad tihiin, mid walibana wuxuu dhammaystiraa waxa midka kale ku liito.
Waxaa ii soo baxday in Dajiraha iyo Generaalku ay yihiin saaxiibbo dhab ah. Haddana ay soo wajahday Ibnu Aadam is waayay Ammuuraa kala geysay.